Archive du 20170228
Kortezin�ny filoham-pirenena Nandratra olona 5
Tsy takona afenina ny setrasetran�ny kortezin�ny olom-panjakana eto amintsika. Ny fiara nentin�ireo mpiambina ny filoham-pirenena indray no namoa-doza tany Mahajanga omaly.
Antoko Otrikafo Mila mametra-pialana ny filoham-pirenena
Tsy mahafoy ny fanjanahantany ny mpitondra ankehitriny, raha ny fanazavan�ny filohan�ny antoko otrikafo, Rajaonah Andrianjaka, tetsy amin�ny biraony etsy Andravoahangy omaly.
Me Hanitra Razafimanantsoa Aleo ny vahoaka no hisafidy izay tiany
Fifidiananana �Inclusives, democratiques, libres et transparentes� no ilaina eo amintsika amin�ny taona 2018, hoy i Me Hanitra Razafimanatsoa filoha lefitry ny Antenimierampirenena Malagasy.
Tamin�ny herinandro dia efa niaiky mihitsy ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana, Rivo Rakotovao fa miadana loatra ny fampandrosoam-pirenena eto amintsika,
Rakotovao Rivo Tsikerain�ny olon�ny HVM
Zara fa nisy olona ny lanonana fifampiarahabana noho ny taona vaovao nataon�ny antoko Hery Vaovao an�i Madagasikara tao Mahajanga ny sabotsy 25 febroary teo.
Raymond Ranjeva Mifandrirotra kanikanin-kena ny mpanao politika Malagasy
Tsy afa-miala amin�ny resaka fampihavanam-pirenena ny vahoaka Malagasy, hoy ny profesora Ranjeva Raymond.
Printsy Albert II de Monaco Mitsidika fanintelony an�i Madagasikara
Hiompana betsaka amin�ny asa sosialy ny dian�ny printsy Alexandre Louis Pierre Grimaldi avy any Monaco eto Madagasikara manomboka anio ankoatra ny fihaonana amin�ireo tompon�andraiki-panjakana Malagasy.
Fikambanan�ny mpanohitra fanandevozana Niova endrika ny fanandevozana
Mbola misy eto amintsika ny fanandevozana saingy miseho amin�ny endrika samihafa, hoy ry zareo avy eo anivon�ny fikambanana Za Malagasy manohitra ny fanandevozana,
Samy nandra mifanambaka !
Salama ve ry Jean a ! Inona indray no voandalana novatsiana avy any andrefan�ny nosy any e ? Manaiky anao izahay amin�ity fandikan-dal�na miharihary ataonao ity a !
Lehiben�ny mpitandro ny filaminana Tsy azo kitikitihina ?
Tao anatin�ny herintaona (2016) dia tsy nahavita nandrafitra politikan�ny fandriampahalemana sy fampandrian-tany ary fandaminana ny fiarahamonina mba isorohana sy hanafoanana ny fitsaram-bahoaka ny fitondrana HVM.
KAOMININA AMBOHIBAO ANTEHIROKA
Tsy "WC" sy trano fidiovana ny 30 %-n�ny mponina Tsy manana trano fivoahana (WC) sy trano fidiovana ny 30 %-n�ireo mponina ao anatin�ny kaominina Ambohibao Antehiroka.
BUS INTELLIGENT 200 tapitrisa Ar no vidin�ny iray
Tsy araka ny nanampoizan�ny koperativa azy ny vidin�ilay �bus intelligent� an�ny orinasa ID Motors, izay kasain�ny fitondram-panjakana hampidirina eto an-drenivohitra sy ny manodidina.
Fanaovana � Visa � sy � Carte de R�sident � hosoka Lehilahy iray voasambotry ny zandary
Lehilahy iray no saron�ny zandary avy ao amin�ny � Direction de la Police Judiciaire � ao amin�ny Fibaikoana ny Zandarimariam-pirenena ny 23 febroary 2017 teo noho ny fanaovana � Visa sy Carte de resident � hosoka.
Tsy miteny fotsiny !
Raha nalaza ny �tsy hiala aho�, tamin�ny andron�ny amiraly, nanda tsy hiala koa ny rain�ny fihavanana tamin�ny fotoan�androny.
Ambodivona Hohavaozina ny tsena sy ny toby fiantsonana fiarakodia
Tsy misy antsojay na fanilikilihana ny fanatsarana sy fanomezana endrika vaovao ny tsena sy ny toeram-piantsonana fiarakodia eny Ambodivona,